तिहारका लागि रोपेको सयपत्री अहिल्यै ढकमक्क, भण्डार गर्ने ठाउँ नहुँदा सस्तोमा बेचिँदै :: नारायण खड्का :: Setopati
दाङ, कात्तिक १०
तिहार लाग्न दुई साता बाँकी छ। तुलसीपुर उपमहागनरपालिका-१७ हेमन्तपुरस्थित ग्रीनकोर ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडभित्रको बारी भने सयपत्रीले पहेँलै भइसक्यो।
'ओरेन्ज' जातको ढकमक्क सयपत्री देखेर त्यो बाटो हिँड्ने जोकोहीको मन लोभ्याउँछ।
'आहा कति सुन्दर फूलको संसार,' ग्रीनकोर लिमिटेडको तार बाहिरै उभिएर एक किशोरी सेल्फी लिइरहेकी थिइन्।
यी फूल क्यामरामा त सधैं कैद भएर बस्लान्, तर बारीमा? वा टिपेर लामो समय जस्ताको तस्तै राख्न सकिँदैन। झन् सयपत्री त दुई हप्तामै बिग्रिन्छ। घाम पानी तथा शितले कालो दाग लाग्छ।
अनि भाइटीकासम्म त फूल ओइलाएर नराम्रो हुन सक्छ।
तर भर्खरभर्खर फूलको व्यवसायिक खेती हुन थालेको दाङमा फूल भण्डार गरेर राख्ने कुनै प्रविधि वा ठाउँ विकास भइसकेको छैन। आद्रता र तापक्रम मिलाएर भण्डार गर्न सके केही समय फूल ताजै राख्न सकिन्थ्यो।
त्यसैले उत्पादन खेर नजाओस् भनेर हेमन्तपुरमा कात्तिक ८ गते नै फूल टिप्न लगाएको कृषि प्राविधिक घनश्याम केसी बताउँछन्।
'हामीले आज झन्डै साढे दुई क्विन्टल सयपत्री फूल बुटवल पठाउन लागेका छौं,' केसीले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'हामीकहाँ फूल स्टोर गरेर राख्ने प्रविधि छैन। बुटवलमा भएकाले बिक्री गरेर त्यहीँ पठाउन लागेका हौं।'
केसीका अनुसार किलोको एक सय ५० रूपैयाँका दरले फूल बुटवलको स्टोर रूमलाई बिक्री गरिएको हो।
हेमन्तपुरमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा भाडा लिएर करिब १७ कठ्ठामा सयपत्री लगाइएको छ। तिहारलाई नै लक्षित गरेर खेती गरिए पनि कात्तिक १९/२० गतेसम्म फूल बिग्रिसक्छ। त्यसैले अहिल्यै टिपेर बुटवल पठाउन थालेको उनले बताए।
यहाँ व्यवसायिक रूपमा गत वर्ष पनि यसैगरी सयपत्री खेती गरिएको थियो। पोहोर तिहार नजिकको समयमा फूलेकाले जिल्लामै बिक्यो। यसपालि भने केहीअघि नै फूलेकाले टिप्नुपरेको अर्का कृषि प्राविधिक सिजन लम्सालले बताए।
'दाङमै भण्डारण सुविधा हुन्थ्यो भने थप फाइदा लिन सकिन्थ्यो,' उनले भने, 'पहिले नै पठाउनु पर्दा केही सस्तोमा बिक्री गर्नु हाम्रो बाध्यता हो।'
सधैं अन्न बाली तथा तरकारीको मात्रै व्यवसायिक खेती हुने दाङमा व्यवसायिक फूल खेती सुरू भएको धेरै भएको छैन। त्यसैले निकट भविष्यमा फूल भण्डार गर्ने सुविधा जिल्लामै बन्ने आशा उनले गरेका छन्।
'हामीलाई जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सबैजसो संस्कारमा फूल नभइ हुँदैन,' लम्सालले थपे, 'तर हामीकहाँ अझै पनि फूलको व्यवसायिक खेती गर्ने भनेपछि मानिसहरू हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ। हामीले त्यो चिर्न सक्नुपर्छ।'
दोघरेमा ५ युवा मिलेर गरेको सयपत्री खेतीः
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-८, दोघरेमा पनि पाँच युवा मिलेर सात कठ्ठामा सयपत्रीको व्यवसायिक खेती गरेका छन्।
जग्गा भाडा लिएर संयुक्त लगानीमा दाङकै संयोजक काफ्ले, झग्गु भण्डारी, अर्जुन भट्टराई, मोहन वली र विशेष खड्काले यो खेती थालेका हुन्। उनीहरूले संयुक्त लगानीमा आफ्नै गाउँठाउँमा केही नयाँ गरौं भन्ने उद्देश्यले फूल खेती सुरू गरेको झग्गु भण्डारीले बताए।
तिहार नै लक्षित गरेर खेती गरेका उनीहरूको बारीमा पनि असोज अन्तिम सातादेखि नै फूल फूल्न थाल्यो।त्यसैले बारीमा पँहेलपुर भएका फूल बिक्री गर्ने ठाउँ नपाएको भण्डारीले बताए।
'तिहार आउन बाँकी नै छ। फूल चाहिने त्यस्तो कुनै उत्सव वा पर्व पनि छैन,' भण्डारीले भने, 'तयारी अवस्थाका फूल समयमै नबेचे हाम्रो मेहनत र लगानी खेर जान्छ। त्यसैले कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने भइरहेको छ।'
कुनै शुभकार्य र पर्वमा बजारमा पाइने कृत्रिम फूलभन्दा प्राकृतिक फूल प्रयोग गर्ने बानी विकास भए युवाहरूको मेहनतले बजार पाउने उनको भनाइ छ।
'पछिल्लो समय चाडपर्व र शुभकार्यमा अप्राकृतिक फूल प्रयोग गरेको पाइन्छ। वास्तवमा त्यो सही होइन। हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको बर्खिलाप हो,' भण्डारीले भने, 'युवाहरूले विदेश मात्रै ताक्छन् भन्ने तर युवाले गरेको काम प्रोत्साहन नगर्ने!'
कतिपय मानिस भने दाङ र आसपासका जिल्लामा फूलको व्यवसायिक खेती नभएको र बाह्रैमास फूल अभाव हुनाले कृत्रिम फूल किन्न बाध्य हुने बताउँछन्। तुलसीपुर बजारमा प्लास्टिक फूल किन्दै गरेकी लक्ष्मी बस्नेत पनि यसै भन्छिन्।
'बजारमा पाँच मिटर घडेरी किनेर त्यसमा टुपुक्कै पारेर घर बनाउनेले सजावटका लागि प्लास्टिकका सामान बढी किन्छन्,' उनले भनिन्, 'कम्तीमा घरअगाडि एउटा रूख-बिरूवा र फूलको बोट नहुनु मानव सभ्यताकै उपहास हो।'
आफ्नै गाउँठाउँमा बाह्रैमास फूल पाइए सजावटका लागि नक्कली फूल किन्नेहरू कम हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय युवाहरू व्यवसायिक रूपमै फूल खेतीमा आकर्षित हुन थालेको खबर सुन्दा खुसी लागेको पनि उनले बताइन्।
यो क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि फूल उत्पादनका लागि नेपालको माटो उपयुक्त रहेको बताउँदै आएका छन्। यहाँ व्यवसायिक रूपमा फूल खेती हुन सके निर्यात गरेर प्रशस्त आम्दानी गर्ने सम्भावना भएको पनि उनीहरू बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १०, २०७८, ०१:५१:००
१० वर्षमा तराईको जनसंख्या २३ लाखले बढ्यो, हिमालको घट्यो
आज चुनाव भएको सबै ठाउँमा गठबन्धनले जित्छ: माधव नेपाल
जसले मोबाइल एपबाट छ महिनामै ३७ करोड बराबरको डलर साटेर खेलाए जुवा
मधेश प्रदेशको जनसंख्या सबैभन्दा बढी, वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर लुम्बिनीमा धेरै